रंगशाला डोजरकाण्डः उसो भए अब रंगशाला बन्दैन त ? विप्लवका नेताले किन यसो भने ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/रंगशाला डोजरकाण्डः उसो भए अब रंगशाला बन्दैन त ? विप्लवका नेताले किन यसो भने ?
1,050 8 minutes read
रंगशाला डोजरकाण्डले लियो नयाँ मोडः ‘धुर्मुस–सुन्तली’ लाई झड्का, प्रकाश कँडेल जनताको ‘हिरो’ !
सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’को व्यक्तिगत महत्वकांक्षाका कारण चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र बनाउन लागिएको भनिएको ‘गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’ विवादमा परेको छ ।
रंगशाला बनाउने भनिएको स्थानसम्म पुग्न अहिले रहेको बाटो ८–९ मिटरको छ । सीताराम कट्टेलले रंगशालासम्म पुग्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डको सडक बनाउँदा ३६ मिटरको बाटो हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मेयर दाहालले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर प्रकाश कँडेललाई कारबाहीको माग र बार भत्काएकोमा क्षतिपूर्ति भराउन दवाव दिएकी छिन् । कुनै बेला मेयरमा रेणु दाहाललाई जिताउन विशेष भूमिका खेलेका प्रकाश कँडेललाई आहिले आएर पार्टी्भित्रैबाट गुटको राजनीतिका कारण कारबाहीमा पारिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लले प्रकाश कँडेलसहितका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाही शुरू गरेका छन् । तर, त्यहाँको विवादको जड के थियो भन्नेबारेमा एसपी मल्लले ध्यान नदिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
कुञ्जना घिमिरे ‘सन्तली’ले प्रकाश कँडेललाई देशद्रोही सम्म भन्न भ्याएकी छिन् । ‘प्रकाश कँडेल देशद्रोही हो । तीन करोड नेपालीको दोषी हो । सरकारले कारबाही गर होइन भने यो सरकारले राजीनामा गर’, उत्तेजित हुँदै उनले भनेकी छिन्, ‘सरकारले रंगशाला बनाउन सकेन ।
जनताले हामीलाई खोजे । सरकारले बनाउन लागेको क्रिकेट रंगशाला १५–१६ वर्षदेखि गोकर्णमा अलपत्र परेको छ । जनताले जनप्रतिनिधि र सरकारलाई खोजेनन् । हामीलाई खोजे ।’
कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ले भनेकी छिन्, ‘त्यस्ता अपराधी, देशद्रोही प्रकाश कँडेलको नागरिकता खोसिनुपर्छ । त्यो नेपाली नागरिक होइन । अन्यत्रै लखेटियोस् । त्यस्ता सन्तानलाई बाँच्ने अधिकार छैन । त्यस्तो सन्तान जन्मदिन आमा‘। त्यो व्यक्तिलाई जहाँ देख्यो त्यही कारबाही गर्नुपर्छ ।’
‘यो जतिपनि बार बनेको छ । जतिपनि काम भएको छ । सबै मलेसिया, कतार, दुबइमा काम गर्ने खाडीमा काम गर्ने, रगत पसिना बगाउने आफ्नो तरकारी खर्च कटाएर दिएको दाजुभाई दिदी बहिनाको पसिनालाई त्यसले हिजो डोजर लगायो’, उनले भनेकी छिन्, ‘प्रकाश कँडेल भन्ने मान्छेको पृष्ठभूमिमा नै जान जरुरी छ सबै जना ।
हिजो कहाँबाट आयो ? यो गाउँ र यो ठाउँको पनि होइन रे त्यो मान्छे । त्यो मान्छे कहाँबाट आइरहेको छ ? हामीलाई किन बिर्गादै छ । हामीलाई त्यसले के नराम्रो कुरा सिकाउँदै छ भन्ने कुरा सबै गाउँलेले सिक्न जरुरी छ ।’
‘यहाँ रंगशाला बन्ला–नबन्ला यदि तपाईहरूको मानसिकता बनेन भनेपछि यो रंगशाला सञ्चालनमा पनि आउँदैन । त्यो व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो भनिएको छ । त्यसले चित्त बुझ्दैन ।
त्यस्ता धेरै नियन्त्रणमा लिएका छन् । त्यो अपराधी हो । कोही अपराधका नाममा निर्दोष मान्छे पक्राउ गरे पनि अहँ हामी कसैलाई पनि चित्त बुझेन । त्यो अपराधीलाई खुलेआम अनुहार देखाउनुपर्छ । यो अपराधी हो भनेर जुत्ताको माला लगाउनुपर्छ । जति पनि बाहिरबाट रकम ल्याएर यहाँ बगाएका छौं सहयोगी मनहरूसँग घुँडा टेकेर माफी माग्नुपर्छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा प्रकाश कँडेलको तस्वीर बिगार्नेदेखि तल्लोस्तरसम्मको गालीगलौज गर्नेसम्म कार्य भएका छन् । विकासको नाममा धुर्मुस–सुन्तलीले गरेका सबै काम ठीक छन कि छैनन् यो अलग विषय हो ।
तर, स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाएर सस्तो लोकप्रियताका नाममा धुर्मुस–सुन्तलीले स्थानीय जनतालाई खराब देखाउने जुन कार्य भएको छ त्यो गलत रहेको सामाजिक सञ्जालमा झिनो स्वरमा उठ्न थालेको छ । दैनिक नेपालबाट
एकैपटक ९ मन्त्रीले दिए राजीनामा !